Sida ay u muuqan doonto shaxda xulka qaranka Spain kulanka habeen dambe oo la sii shaaciyey… (Yaa ku soo bilaabanaya?) – Gool FM
Sida ay u muuqan doonto shaxda xulka qaranka Spain kulanka habeen dambe oo la sii shaaciyey… (Yaa ku soo bilaabanaya?)
(Malta) 25 Maarso 2019. Xulka qaranka Spain ayaa eegaya inuu hoggaanka Guruubka F ku qabto lix dhibcood marka ay u safraan Malta habeen dambe kulankooda labaad ee isreeb-reebka Euro 2020.
La Roja ayaa Sabtidii 2-1 ku garaacay Norway kulankoodii furitaanka isreeb-reebka tartanka qarammada Yurub ee Euro 2020, laakiin xulka macallin Luis Enrique ayaa rajaynaya inay sii wadi doonaan guulahooda kulankooda xiga ee habeen dambe ay la leeyihiin Malta.
Haddaba waxaa la sii shaaciyey shaxda uu xulka qaranka Spain ku soo geli karo kulanka habeen dambe, waxaana ka soo muuqday xiddigo waa weyn.
Goolhaye David de Gea, Sergio Ramos, Jordi Alba iyo Inigo Martinez ayaa la filayaa inay boosaskooda sii haysan doonaan, halka Sergi Roberto, Saul Niguez iyo Sergio Canales lagu soo dari karo safka hore.
Iker Muniain ayaa la rajaynayaa inuu ku soo bilowdo afka hore ee xulka Spain kulan habeen dambe, halka Alvaro Morata uu sii haysan doono booskiisa weerarka kulankan ay martida yihiin.
Jaime Mata oo keydka ku jiray kulankii Norway ayaa shaki laga galinayaa safashada xulkiisa qaranka kulan, waxaana 30 sano jirkaan uu dhaliyey 13 gool 25 kulan oo uu horyaalka La Liga u saftay kooxda Getafe xilli ciyaareedkan, isagoo haddii uu taam yahay noqon kara dooq kale oo uu haysto macallin Enrique.
Marco Asensio iyo Sergio Busquets ayaa ka mid ah kuwa laga yaabo in laga saaro safka hore ee xulka qaranka Spain kulanka habeen dambe.
Haddaba halkaan hoose ka eeg shaxda safka hore ugu soo bilaaban karta habeen dambe xulka qaranka Spain:-
Kooxda Manchester United oo loo sheegay qiimaha ay ku heli karto Harry Maguire
“Juventus hadii ay sameyso hal arin waxay ku guuleysan kartaa Champions League” - Andrea Pirlo